ဘတ်ဂျက်၊ ရသုံးငွေစာရင်း | Open Development Myanmar
မြန်မာနိုင်ငံ ဘတ်ဂျက်ဆိုင်ရာ လုပ်နည်းစဥ်များနှင့် ပတ်သက်ပြီး ဒေသခံပြည်သူများပိုမိုပါ၀င်နိုင်ရန်နှင့် အစိုးရဘက်မှ ပိုမိုပွင့်လင်းမြင်သာလာရန် လိုအပ်ချက်များရှိပါသည်။ ‌၂၀၁၇-၁၈ ဘဏ္ဍာနှစ်မှ ဘတ်ဂျက်ကိုသုံးသပ်ခြင်းအားဖြင့် ဒေသအလိုက်အစိုးရလုပ်ငန်းများ အ‌ကောင်အထည်ဖော်ရာတွင် ဗဟိုအစိုးရမှ ခွင်ပြုထုတ်‌ေ၀ ပေးသော ထောက်ပံ့ငွေတွေအပေါ် မှီခိုမှုများပြားနေဆဲတွေ့ရှိရပါသည်။ ဘတ်ဂျက်လုပ်နည်းစဥ်များနှင့် သက်ဆိုင်ပြီး ဗဟိုအစိုးရမှ လုပ်ပိုင်ခွင့်‌များခွဲ့‌‌ပေး ခြင်းကြောင့် အကျိုးကျေးဇူးများ ရရှိနိုင်ပါသည်။ သဘာ၀ အရင်းအမြစ် စီမံခန့်ခွဲရေးတွင် ပြည်သူများပိုမိုပါ၀င်စေရန် ရှမ်းပြည်နယ်တွင် ပြုလုပ်သည့် စွမ်းရည်မြှင့်တင်ရေး အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲတစ်ခုမှ မြင်ကွင်း။ ဓာတ်ပုံရရှိသောနေရာ: Heinrich Boll Stifftung, Southeast Asia. လိုင်စင်: CC BY-NC-SA 2.0. ‌ မြန်မာနိုင်ငံဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအရ ပြည်ထောင်စု နှင့် ...